Fanitsakitsahana ny zo fototra : Tafapetraka ny fitoriana an’i Maitre Hanitra Razafimanantsoa -
AccueilSongandinaFanitsakitsahana ny zo fototra : Tafapetraka ny fitoriana an’i Maitre Hanitra Razafimanantsoa
Fanitsakitsahana ny zo fototra : Tafapetraka ny fitoriana an’i Maitre Hanitra Razafimanantsoa
04/05/2018 admintriatra Songandina 0
Nanatitra sy nametraka ny fitoriany teny amin’ny Fitsarana eny Anosy ny senateran’i Madagasikara, Olivier Rakotovazaha, sy ny mpisolo vava azy, omaly. Nambarany tamin’izany fa mitory ireo solombavambahoaka telo mivondrona ao amin’ny depiote ho an’ny fanovana miisa telo ny tenany, ka anisan’izany ny depioten’i Madagasikara, Hanitra Razafimanantsoa, sy ny depiote Jean-Michel Henry, sns. Tafiditra ao anatin’izany fitoriana izany koa ingahy Hery Rasoamaromaka, lohandohany eo anivon’ny Mapar.
Raha ny fanazavana, nametraka fitoriana ity senatera ity noho ny herisetra natao taminy sy ny amboletra nidiran’izy ireo tao amin’ny biraony ny alarobia teo tao amin’ny toeram-piasany tetsy Ampefiloha. Voalaza ihany koa fa tsy araka ny sitrapon’ity senatera ity no nanidian-dry Me Hanitra Razafimanantsoa sy ny ekipany azy tao amin’ny birao fiasany tamin’ny alalan’ny fanidy avy ety ivelany, “cadenas” sy rojo vy. Izany hoe, nohidian’ireto solombavambahoaka mpanakorontana ireto sy ny mpanara-dia azy avy ety ivelany izany ny birao fiasan’ny senatera Olivier Rakotovazaha, ary dia tavela tao ny tenany.
Tsy vitan’izay fa mitory ihany koa ity senateran’i Madagasikara ity noho ny fandrahonana sy fampitahorana sy antsonjay natao taminy.
Nambaran’ny senatera Olivier Rakotovazaha mantsy fa fihetsika tsy mifanaraka velively amin’izany atao hoe demokrasia izany ny fihetsik’ireto solombavambahoaka notarihin-dramatoa Hanitra Razafimanantsoa ireto izany, izay tsy mamela malalaka ny olona amin’ny safidy ananany sy ny heviny amin’ny fandraisana anjara amin’ny fanakorontanana sy fikomiana izany na tsia azy ireo. “Tsy atao sy hanaovana tery vay manta ny olona amin’ny safidy ananany”, hoy hatrany ity senatera ity.
Notsindriany ihany koa fa efa tsy mifanaraka ary tsy manaja intsony ny voarakitry ny Lalàm-panorenana ny fihetsik’ireto solombavambahoaka sy ireo mpanara-dia aminy ireto tamin’izany.
“Efa eo am-pelatanan’ny Fitsarana mahefa ny fitoriana, ka mamela azy ireo hanatanteraka ny asany mifanaraka amin’ny fitoriana nataoko sy napetrako aho. Miandry ny valiny isika izany manomboka eto”, hoy ny senatera Olivier Rakotovazaha.
Ao anatin’ ny kihon-dalana amin’ny fanatanterahana ny fifidianana isika eto Madagasikara amin’ izao fanitsahana ny taona 2018 izao, ary nanamafy izany rahateo ny filoham-pirenena nandritra ny kabariny tetsy amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ny zoma lasa teo. ...Tohiny